Rakkoon Gaanfa Afrikaa eenyu? – Jaawwii.org
Posted byBakakkaa Bonaa 11th Jan 2021 11th Jan 2021 Posted inUncategorized
Lola ammaan taana gaanfa Afrikaa waadaa jiruuf itti gaafatamaan abbaa nobel nagaa 2019ti. Hubannoo malee gahuumsaaf seenaa dubbee isaa osoo qoratanii ilaalcha keessa hin galchiin eejjannoo yeroo gabaabduu qofa ilaaluun abboota irree dantaa egereef wal tumsaan lamaan araaramuu gidduu galeessa godhatuun badhaasa hin madaallee kennuufin faarsaa hin madaallee addunyaan faarsaa turte. Mummicha ministeera Itoophiyaa Abiy ahmed. Faaruu biyyoota dhihaaf mootummoota addunyaa kanaan kan gurri duude koloneelli waraanaa kun of tuulummaaf miira amantii dhuunfaa isaa hordofuun biyya hoggaanuuf adeemsa taasiseen godiina gaanfa Afrikaa gara jeequmsaatti ceesisaa jira.
Dhaabbileen addunyaa kanaa kanneen waggaa darbe faarsaaf leellisaa turaan hundiyyuu bara kana rakkoo gaanfa Afrikaa muudateef itti gaafatamaa taasisaa jiru. Haalumaa kanaan moggaasa
~hoggaana nagaa irraa gara hoggaana waraanatti, hoggaana ilma abbaa gadaa irraa gara ilma abbaa irreetti, nama nagayaa irraa gara nama hokkoraaf jeequmsaatti waggaa lama keessatti haala nama qaanessuun addunyaa biraatti hubatamee. Durumayyuu rakkoo keessoo Impaayerattii osoo hin furiin saaduu fi faaruu argatuuf akkasumaas deeggarsa siyaasaaf tumsa sobaa qofaan biyya gaggeessuuf ol muldhisuu irratti xiyyeeffatuun imaammata PP fi hoggaana PP kan hangafaa tahee. Kanaanis biyyoota ollaa muraasa hin jedhamnee waliin waan irratti waliif galuu hin dandeenye eegaluun rakkoo akka ammaa kana keessa seenee jira. Biyyoonni Addunyaa guutuun ammaatti maddi rakkoo gaanfa Afrikaaf Impaayera itoophiyaa garee biyyaan bulchaa ofiin jedhee aangoo mootummaa heeran ala humna waraanan dhuunfate tahuu hubachuun akeekaa jiru.
Gama kaaniin uummattoonni eenyummaa saba biyyaa fi seenaa mataa isaanii qabaan kan impaayerattii keessa jiraan bulchiinsa hoggaanummaa koloonel Abiy gaggeeffamaa jiru mormuun karaa irratti bahanii jiru. Kunis mataa dhullunnii fi xumura Impaayeratti tahuu agarsiisaa jira. Kanaanis saboonni akka walayittaa diddaa isaanii itti fufuun uummattoota kibba keessatti dhiibbaa yoo uumaan kanneen akka qimant, agawu fi kkf amaara keessa jiraatan immoo lafee dugdaa mootummaa giddugaleessaa tahuun kan duula saboota irratti qindeessaa jiraan humna Amaaraa gara bittiimsuutti oofaa jiru.
Saba oromoo dabalatee uummattoonni duraaniyyuu bulchiinsa impaayeraa irratti mormii dhiheessaaf diddas agarsiisaa turaan immoo gsadarkaa diddaa isaanii guddisuun gara qawwee kaasuutti adeemanii jiru. Kanaanis waggootan 45 ol darbaniif kan impaayera dulloomtuuf rakkoof yaaddoo tahaa turee waraanni bilisummaa Oromoo WBOn miliyoonan hiriiruun haleellaa PP wabii impaayeraa tahaa jirtu irratti taasisuu jabinaan itti fufee jira. Kanaanis abdii sab-bicuu Oromiyaa fi saboonni impaayeratti keessa jiraan abdii isaanii WBO taasifataa jiru. Uummanni oromoo kallattii hundaan diddaa PP irratti adeemsisaa jiruu jabeessee itti fufuun mataa dhukkuubbi bulchiinsa waraanaa kolonel abiyiif tahee jiraa.
Gama kaaniin PPn abiyin hoggaanamtu biyya keessatti rakkoo uummataa furuu hanqatuu bira darbuun rakkoo keessoo isaanii furuu dadhabanii jiru. Karaa biraan lola Tograay waliin eegalaan goolabuu dadhabuun impaayerattiin mootummaa malee jiraachuu ragaa bahaa jira. Tumsa ertiraan kan lola saboota irratti bante PPn duula eenyummaa sabootaa balleessuu akka yaaddeetti xumuruu hanqatuun caalatti kufaatii ishii ariifachiisaa jira. Qabsoon bilisummaa oromoo daraan jabaatee itti fufuun abbaa irree waan qabuuf dhiisuu wallaalchisuun tarkaanfii of balleessuu akka of irratti fudhatuu godhaa jiraa.
Gama diinagdeetiinis sharafa doolaaraa gara 14 birrii itoophiyaattin gad buusa jedhee kan waadaa galuu hanqatuun olkaasuun 40 taasisee jira. Gama kaanin immoo yakkaamtoota TPLF barootaaf uummata saaman qabeen siniif dhiheessa jedhee waraana qulqulloota irratti baneen qaama impaayeratti kan taate tigrayiin guutumaan guututti daaressee jira.
Walumaagalaatti rakkoon impaayera Itoophiyaa muudatee impaayeroota diigamaan armaan duraa waliin wal bira qabnee yoo ilaallu isa hundarra hammaataa fi yaaddeessaa akkasumaas bulchiinsa boodatti hafaa fi rakkoon guutamee waggaa 50n darbaan Afrikaa keessatti muldhaatan keessaa kan sadarkaa duraa qabaatuudha.
Haala ammaa adeemaa jiruu kana hunda hubachuun nageenya godina afrikaaf uummatichaaf wabii tahuuf addunyaan kun Waraana Bilisummaa Oromoo fi ABO waliin dhaabbachuu qabdi.